Wechina uye yokupedzisira nhungamiro inogona kutungamirira mafungiro ako ndiwo Kuremekedza Mutemo uye Public Interest. Pfungwa iri rinobva Menlo Report, uye saka anogona zvishoma aizivikanwa munzanga nevaongorori. The Menlo Report anoti nheyo Kuremekedza Mutemo Public Kufarira chiri mushoko nheyo Beneficence, asi Menlo Report anoti sezvarinokodzera yakajeka nezvazvo. Mupfungwa dzangu, nzira yakanakisisa kufunga nezvemashoko aya ndechokuti Beneficence achiverengera kutarisa vechikamu uye kuti Kuremekedza Mutemo uye Public Kufarira zvakajeka rinokurudzira vanotsvakurudza kutora vakwanise maonero uye anosanganisira murayiro nezvavanofunga dzavo. In analoginen zera tsvakurudzo-zvakadai chinyakare kuongorora uye yezvirwere kuedza-vatsvakurudzi vakanga kashoma kuti netsaona kuputsa mutemo. In paIndaneti tsvakurudzo, izvi zvinosuwisa ndoda wechokwadi.
Mune Menlo Report, Kuremekedza Mutemo uye Public Kufarira ane maviri akasiyana zvinoriumba: (1) Compliance uye (2) Transparency-inobva Kuzvidavirira. Compliance zvinoreva kuti vaongorori vanoedza kuziva uye mitemo akakodzera, makondirakiti, uye mazwi basa. Somuenzaniso, uchiwirirana zvaizoreva kuti mutsvakurudzi kufunga tichibvisa zviri website anofanira kuverenga uye funga mashoko-of-basa chibvumirano kuti Website. Panogona Zvisinei, kuva mumamiriro ezvinhu apo zviri bvumidzwa kutyora mashoko dzebasa. Somuenzaniso, pane imwe nguva zvose Verizon uye AT & T aiva mashoko basa aidzivisa vatengi kubvira kushoropodza kwavari (Vaccaro et al. 2015) . Vatsvakurudzi hakufaniri kwaitika akasungwa akadai-of-basa zvibvumirano. Zvakanakisa, kana vaongorori hazvienderani mashoko dzebasa zvibvumirano, vanofanira kutsanangura sarudzo yavo pachena (semuenzaniso, Soeller et al. (2016) ). Asi, nokusununguka ichi vanogona pachena vatsvakurudzi kuti akawedzera pamutemo ngozi. MuUnited States, somuenzaniso, Computer Kubiridzira uye Zvisina Kufanira Act inoita pamutemo kuti vaputse Tichitevera zvibvumirano basa (Sandvig and Karahalios 2016) .
Uyezve, zvinhu pachena-kwakavakirwa kuzvidavirira zvinoreva kuti vaongorori vanofanira kuva akajeka pamusoro zvinangwa, madzidzisiro, uye migumisiro panguva muzvikamu zvose zvorwendo kutsvakurudza bumbiro uye kutora basa yezviito zvavo. Imwe nzira kufunga pamusoro kuzvidavirira ichi pachena ndeyekuti riri kuedza kudzivisa pakutsvakurudza munharaunda kuita zvinhu muchivande. Izvi kuzvidavirira pachena-inobva rinoita rinobatanidza basa nokuda pakutsvakurudza munharaunda uye voruzhinji chemufungo nharo, izvo zvinokosha zvose yetsika uye anoshanda zvikonzero.
Kushandisa nheyo Kuremekedza Mutemo uye Public Interest muzvidzidzo izvi zvitatu zvinoratidza zvimwe kunzwisisa vatsvakurudzi vanotarisana kana totaura mutemo. Somuenzaniso, Grimmelmann (2015) akaita nharo kuti Emotional Contagion kunge zvisiri pamutemo pasi pamurayiro State of Maryland. Kunyanya, Maryland House Bill 917, vakapfuura muna 2002, anotuma Common Rule kuchengetedzwa nokutsvakurudza zvose inoitwa Maryland, pasina mari panobva (yeuka kuti nyanzvi dzakawanda dzinofunga kuti Emotional Contagion haana pasi Common Rule pasi Federal Mutemo nokuti chaiitirwa pana Facebook, nesangano kuti haagamuchiri tsvakurudzo mari kubva US Government). Zvisinei, dzimwe nyanzvi dzinofunga kuti Maryland House Bill 917 pachayo nebumbiro [ Grimmelmann (2015) ; p. 237-238]. Muchiita Vatsvakurudzi munzanga havasi vatongi, uye saka havasi kukwanisa kunzwisisa uye kuongorora mubumbiro romutemo mitemo zvose 50 US inoti. kuoma aya aiwedzerwa mune dzakawanda zvirongwa. Encore Somuenzaniso, vanobatanidzwa vechikamu kunyika 170, izvo zvinoita pamutemo uchiwirirana kusimba zvakaoma. Achipindura kune zvakawanda zviri pamutemo kwezvakatipoteredza, vatsvakurudzi vanofanira kungwarira atakure rechitatu-vebato yetsika muchidimbu basa ravo, sezvo vaviri tsime mazano pamusoro nomutemo uye somunhu oga kudzivirira kana tsvakurudzo yavo nokusaziva pamutemo.
Ukuwo, zvidzidzo zvose vatatu yakabudiswa migumisiro dzavo kwomudzidzi Magazini kugonesa pachena-inobva kuzvidavirira. Kutaura zvazviri, Emotional Contagion yakabudiswa rakavhurika kuwana saka pakutsvakurudza munharaunda uye yakakura hwepachena takaudzwa-mushure chokwadi-pamusoro magadzirirwo uye migumisiro pakutsvakurudza. Mumwe mutemo pamusoro thumbs kuongorora zvinhu pachena-inobva vachazvidavirira ndiko kuzvibvunza: ndinoda wakasununguka kana tsvakurudzo yangu zvesangano akanyorwa pamusoro pamberi peji yangu pepanhau mutaundi musha? Kana mhinduro iri kwete, kuti chiratidzo simba kuti kwenyu tsvakurudzo magadzirirwo inoda kuchinja.
Mukugumisa, Belmont Report uye Menlo Report zvamaronga mazano mana kuti inogona kushandiswa kuongorora kutsvakurudza: Kuremekedza Persons, Beneficence, Justice, uye Kuremekedza Mutemo uye Public Interest. Kushandisa mazano aya mana uchidzidzira hakusi nguva dzose zvakarurama, uye rinogona zvinoda BALANCInG zvakaoma. Somuenzaniso, kana vachisarudza debrief vechikamu kubva Emotional Contagion, Kuremekedza Persons kuti kukurudzira debriefing nepo Beneficence kuti mwoyo debrief (kana debriefing dai pacharo kuita zvakaipa). Hapana nzira zvaitika chinonengaidza aikwikwidzana mazano aya, asi pane imwe zvishoma, pfungwa ina kunyatsoburitsa zvokutengeserana-offs, anoratidza kuchinja kutsvakurudza mazano, uye vakwanise vatsvakurudzi kutsanangura kufunga kwavo nemumwe uye voruzhinji.